Maxaa Ka Jira In Barcelona Heshiis La Gaartay Sergio Aguero.
HomeWararka CiyaarahaMaxaa ka jira in barcelona heshiis la gaartay Sergio Aguero.
Barcelona ayaa ‘heshiis bilaash kula soo wareegeyso weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero oo si xor ah ugu soo biiraya iyadoo la fahamsan yahay inuu ‘aad ugu dhow yahay ku biirista barcelona
Madaxweynaha cusub ee Barcelona Joan Laporta ayaa ogolaaday in la dhameeyo heshiis labo sano ah oo uu la galayo 32 jirka u dhashay wadanka argentina, kaasoo soconaya ilaa June 2023.
Qandaraaska weeraryahanka reer Argentine ee Aguero ee Etihad ayaa dhacaya xagaagan, taasoo la micno ah in kooxaha ka baxsan Spain ay bilaabi karaan wadahadalada qandaraaska laga bilaabo bisha Janaayo si ay ugu dhaqaaqaan taas oo aan ku lug laheyn lacagta wareejinta.
Sida laga soo xigtay AS, sababta kaliya ee heshiiska aan loo saxiixin ayaa ah sababta oo ah in kasta oo Laporta ay tahay inuu madaxweyne noqdo waqti dhow, Carles Tusquets ayaa ku meel gaadh ah.
Wakiilka Aguero Hernan Reguera ayaa u soo bandhigay 97-ka xiddig ee caalamiga ah seddexda musharrax ee madaxweynaha Laporta, Victor Font iyo Toni Freixa, iyadoo ereyadiisa ay u muuqdaan inay xiriir la leeyihiin qareenka Laporta.
Kooxda reer Catalan ayaa durbadiiba ku guuleysatay kala bar kooxda City Eric Garcia, oo 20 jir ah qandaraas shan sano ah, sidoo kale waa lacag la’aan.
Bilow cusub oo Nou Camp ayay u badan tahay inuu tijaabiyey Aguero, kaasoo dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareed dhaawac ah oo uu rigoore u dhigay Fulham Sabtidii.
Cusboonaysiinta ayaa sidoo kale macnaheedu noqon karaa joogitaan dheer oo loogu talagalay weeraryahanka talismanic iyo ninka ay isku wadanka yihiin ee Lionel Messi, iyadoo wargeyska maalinlaha ah ee Spain uu soo jeedinayo in heshiiska Aguero uu shuruud ku xirnaan karo Messi oo kooxda ku sii jira.
Goolhayihii hore ee Barcelona iyo agaasimaha kubada cagta Andoni Zubizarreta ayaa si xoogan uga fiirsaday saxiixa Aguero sanadkii 2014, ka hor inta uusan ugu dambeyntii u ciyaarin Luis Suarez, kaasoo cadeeyay guul weyn kooxda.
Waxaa sidoo kale la fahamsan yahay in saxiixa 5’8 \_”weeraryahanka uusan ka hor istaagi doonin inuu u dhaqaaqo xiddiga kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland, kaasoo loo arko inuu yahay udub dhexaadka shaqaalaysiinta Barcelona ee ololaha soo socda.
Aguero wuxuu siin lahaa dabool aad u wanaagsan iyo tartan loogu talagalay Noorwiijiga, isagoo ku daraya tallaabo cad oo tayo leh oo ka timid Martin Braithwaite oo bixinaya ikhtiyaar u beddelaya ciyaarta iyo khibrad ballaaran.
Si kastaba ha noqotee, tallaabada ayaa laga yaabaa inay xiriir wanaagsan la yeelato Laporta iyo tababaraha Ronald Koeman, kaasoo dalbaday saxiixa Lyon’s Memphis Depay, kaasoo qandaraaskiisu sidoo kale dhacayo xagaagan, in ka badan hal sano.